Ahoana ny fahitana ny fampiasana RAM an'ny rindranasa Android | Androidsis
Eder Ferreño | | Fampiharana Android, Android cheat
Ireo rindranasa napetrakao amin'ny telefaona Android dia mandany loharano. Azontsika atao foana ny mifehy ny isan'ny mandany angona finday. Azo atao koa ny mijery izay rindranasa tokony hataontsika bateria bebe kokoa no mandany amin'ny fitaovana. Na dia ampahany lehibe amin'ny fampahalalana aza ny fahalalana ny fampiasana ny fahatsiarovana RAM izay entin'ireto fampiharana ireto.
Zava-misy fa amin'ny toe-javatra maro dia tsy nohajaina loatra, na dia zavatra tokony hohajaina aza. Noho izany, tsara ny mahafantatra hoe iza amin'ireo rindranasa napetrakao amin'ny Android no ireo izay mandany ny fitadidiana RAM indrindra. Zava-misy izay mety ho tena manandanja.
Ary koa, zavatra tsara ho fantatra izany, satria amin'ny tranga sasany Ny fihinanana RAM dia mety ho avo loatra. Izay mety hahatonga ny finday hiadana kokoa noho ny mahazatra. Arakaraka ny maha-avo ny fanjifana RAM na ny fahafenoan'ny RAM amin'ny finday Android antsika no miadana kokoa ny fandidiana.
Amin'ny tranga sasany, misy ny lalao na ny fizotrany mandany vola be. Noho izany, mandritra io fotoana io dia mazava ny antony mahatonga an'io fampiasana fahatsiarovana avo io. Na dia indraindray aza, ny rindranasa tsy dia fantatra loatra dia ireo izay manana io fampiasana be io. Noho izany, tsy maintsy afaka manamarina azy ianao.
1 Ahoana ny fomba hijerena ny fampiasana RAM amin'ny Android
1.1 Amin'ny Android 7.1 sy ambany
1.2 Amin'ny Android 8.0 sy ambony kokoa
Ahoana ny fomba hijerena ny fampiasana RAM amin'ny Android
Miankina amin'ny kinova Android izay napetraka, ny fizotrany dia mety ho somary tsy hitovizany hahafantarana ny fampiasana RAM izay ampiasain'ny rindranasa an-telefaona. Nefa sarotra amin'ny fotoana rehetra. Ary tsy mila fangatahana antoko fahatelo ianao amin'izany. Ka tsy hanana olana ianao.
Amin'ny Android 7.1 sy ambany
Raha toa ianao ka manana kinova Android mitovy na ambany noho ny Nougat, dia tsotra be ireo dingana manaraka. Mila miditra amin'ny fikirakira telefaona aloha ianao. Avy eo dia mila midira amin'ny fizarana fampiharana fa ireo dia ao anatin'ireo toe-javatra ireo ihany.
Avy eo dia mila manokatra ny menio na fikiranao ianao ao amin'io faritra io. Avy eo, azo atao ny mampiseho ireo fampiharana arakaraka ny fampiasan'izy ireo ny fahatsiarovan'ny telefaona. Atỳ, ny fampiasana RAM nataon'ireto application ireto dia haseho eo amin'ny efijery. Fomba tsara hanamarinana hoe iza amin'izy ireo no be mpampiasa indrindra.
Ka azo inoana fa te hampiasa fampiharana vitsivitsy kokoa isika na mieritreritra fa misy ny sasany izay mety mampiasa loatra. Fampahalalana tena ilaina tokoa, izay azo alefa amin'ny fomba tena tsotra eo amin'ny sehatry ny telefaona. Raha sanatria ka zahana 100% ny RAM, zava-dehibe ny fanakatonana ny fizotrany sasany, mba hialana amin'ny fisehoan-javatra miadana Android izay mitranga rehefa mitranga izany.
Amin'ny Android 8.0 sy ambony kokoa
Ho an'ireo mpampiasa manana Android farany, hafa ny dingana arahana. Na dia tsy sarotra aza izy ireo. Toy ny mahazatra dia tsy maintsy manomboka amin'ny fanokafana ny toe-telefaona ianao. Amin'ity tranga ity dia tokony hosokafana ireo safidin'ny mpamorona. Noho izany, raha mbola tsy anananao ireo dia mila mandeha any amin'ilay faritra ianao momba ilay fitaovana ary tsindrio imbetsaka amin'ny isa fanangonana.
Rehefa nosokafana ny safidin'ny mpamorona dia mila miditra ao amin'ny faritra fahatsiarovana ianao. Avy eo misy fizarana izay Io no fahatsiarovana ampiasain'ny rindranasa. Io no tokony hidirantsika amin'ity tranga manokana ity. Misaotra an'io fa ho hitantsika ny fampiasana RAM izay ampiasain'ny rindran-telefaona.
indray, raha hitantsika fa 100% no nakana ny RAM Android, hiasa miadana ny fitaovana. Voatery izahay hanidy ny sasany amin'ireo fizotrany mba hiasa tsara indray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana no hahitana izay fampiharana mampiasa RAM betsaka indrindra amin'ny Android
Fancade dia saika ny fitohizan'ny Mekorama, na dia misy fahasamihafana kely aza